Manaikitra ny kibo, tsy voatery hihetsi-jaza foana
Bevohoka : Ny tokony atao isan’andro, mahasalama
Fotoana isan’ny saro-pady ho an’ny vehivavy ny fitondrana vohoka. Aina 2 mantsy no koloina sy tandrovana. Araka izany, zava-dehibe mihitsy ny lafiny ara-tsakafo. Ireto no tokony hojerena manokana.
Mampitony « hemorroïde » amin’ny « vinaigre de cidre »
Avy amin’ny fitohanana, fikorontanan’ny tsirim-panentanana, fahazarana ratsy eo amin’ny fomba fisakafoanana ary hatavezana diso tafahoatra ny hemoroida.
Ireo sakafo mampiakatra ny hery fiarovana voajanahary
Rehefa marary dia midina ny tahan’ny hery fiarovana ao anaty. Ny fitazonana ny na ny fampitomboana ny hery fiarovana voajanahary mihitsy noho izany no isan’ny antoky ny fahasalamana. Ireto misy sakafo azo hanina.
Mitazona bika, misoroka diabeta ny yaourt
Tsy mitondra kalôria betsaka ny yaourt, saingy manan-karena kalsiôma sy « probiotique » kosa, izay manome aina ho an’ny vatana.
Divay mena : Miaro amin’ny sery sy gripa …
Manome fahafinaretana ho an’ny lela sy ny tenda ary mitondra fitoniana ny divay, amin’ny ankapobeny.
Bevohoka : Inona no tena ilàna ny « échographie »?
Fizahana tena ilain’ny vehivavy mitondra vohoka ny « échographie ». Sady fomba iray ahafantarana ny fitombon’ny zaza ao am-bohoka izy io no ahafahana mamantatra ireo tsimetimety amin’ny fahasalamana, ary haminavinana ny fomba hiterahana, mifanaraka amin’ny vohoka entina.
Azo amantarana ny aretina ny lokon’ny “pipi”
Porofon’ny fahasalaman’ny olona iray ny lokon’ny fivalanan-dranony. Ireto no anton’ny fiovaovan’ny lokony ho mavo be, manga, mena sns.
Ny fihetsehan-jaza no fotoana fiantombohan’ny fiterahana, rehefa tonga eo amin’ny fahasivy volany ny kibon’ny vehivavy bevohoka. Indraindray anefa, mety hitranga ihany koa ny fihetsehan-jaza tsy ara-dalàna (faux travail). Ny mahakasika izay no hitondram-panazavana anio.
Ny tena atao hoe : mihetsi-jaza
Tokony ho fantatra tsara fa ny atao hoe : mihetsi-jaza dia rehefa ho teraka. Ireto telo ireto no tena miseho, ka hahafantatarana fa efa ho teraka ilay vehivavy :
1. Manaikitra ny kibo: miseho mandritra ny 1 minitra eo ho eo izany, mijanona kely ary miverina manaikitra indray, afaka 10 na 15 minitra eo ho eo.
2. Misokatra ny vozon’ny tranon-jaza rehefa tsapain’ny mpitsabo, na ny mpampiteraka.
3. Misy fambara hafa ihany koa : misy rano (ranon-dohany) na rà kely mandeha.
Ny “faux travail”
Ny kibo manaikitra ihany no miseho amin’izy ity, fa tsy misy fambara hafa no sady tsy misokatra ihany koa ny vozon-trana-jaza (col de l’utérus). Matetika, any amin’ny fisafoana no ampianarina ny vehivavy bevohoka ny “faux-travail”.
Inona no tokony atao ?
Raha sendra miseho io “faux travail” io dia tokony hanatona tobim-pahasalamana avy hatrany. Mila fizahana sy fanaraha-maso akaiky mantsy ny vohoka ary averina isaky ny ora 3 na 4 izany hanamarinana raha tena mihetsi-jaza marina, na tsia. Anontaniana ny volana nitondrany vohoka, sao aloha loatra ka mila miditra hôpitaly haingana ilay vehivavy.
Ho an’ilay vehivavy manokana
Tsy tokony hikoropaka ny vehivavy eto. Mangalà aina, milona ao anaty rano mafana, izay zakan’ny tena. Araho an-tsakany sy an-davany ny torohevitry ny mpitsabo raha mila mihinana fanafody.